FAQs - Taizhou Wanquan Kunze & Export Co, Ltd.
Iwe uri kambani yekutengesa kana kugadzira?
hongu, isu tiri imwe nyanzvi yekutengesa kambani, isu tinonyanya kupa yedu yekutengesa sevhisheni yevatengi.we tine hukama hwakasimba kwazvo nemamwe makuru uye akanaka mafekitori.we kubatsira vatengi vedu kusarudza zvigadzirwa zvakasiyana, uye isu tinounganidza uye kuendesa pamwechete.we tinogona kuchengetedza yakawanda yenguva yevatengi.in inguva inoreva nguva, isu zvakare tinotarisa uye kuyedza zvinhu kune vatengi, isu tinopa imwechete yakazara yekutengesa sevhisi.
isu hatisi kukumbira vatengi vedu kuisa odha neMOQ, tinogona kusanganisa zvigadzirwa zvakasiyana neakasiyana qty yevatengi
Unogona kupa vakasununguka ivhu?
hongu, kune zvimwe zvigadzirwa, mamwe mamodheru, isu tinogona kupa mahara sampuli kune vatengi, asi zvese zvifambiso zvemitero zvinofanirwa kubhadharwa nevatengi .kamwe vatengi vanoisa maodha, isu tinodzorera iwo mutero wekutakura kune vatengi.
Ndeipi avhareji inotungamira nguva?
Zvekujaira nguva dzose, kazhinji isu tinotakura mukati memazuva makumi matatu neshanu kana makumi mana mushure mekugamuchira dhipoziti.kana mumwaka wakabatikana kana zvimwe zvikonzero zviri pasi pekutonga, nguva yekuendesa ichave yakanonoka, asi izvi zvese zvikonzero zvekunonoka zvinotsanangurwa mushe mushe kune vatengi
Kazhinji tinogamuchira mazwi ekubhadhara ne30% T / T pamberi, 70% T / T mushure meBB copy.in kuti tiite bhizinesi riri nani pamwe chete, tinogona zvakare kukurukura mazwi ekubhadhara mushure menguva yekubatana!
Zvakadii nezve garandi nguva uye mushure mekushandira?
Kune akawanda zvigadzirwa zvatinopa kumutengi, isu tinopa gore rimwe kana yakawanda nguva yewarandi. isu zvakare tichapa vatengi zvimwe zvemahara zvikamu izvo zvinoshandiswa kugadziridza sevhisi. panguva imwecheteyo, isu tinopa vatengi techinical rutsigiro online